Ahoana ny fomba hanomanana sy hankafizana fitsangatsanganana fiara | Vaovao momba ny dia
Na dia manana zotram-piaramanidina lafo vidy aza dia lasa mora vidy kokoa ny mandeha amin'ny fiaramanidina, misy hatrany ireo te hanao ny iray amin'izany fitsangatsanganana fiara, mahita ny zavatra amin'ny hafainganao ary mankafy ny fijanonana tsirairay. Ny fandaminana ny dia amin'ny alàlan'ny fiara dia hafa noho ny fanaovana azy amin'ny fiaramanidina, satria tsy maintsy mijanona bebe kokoa ianao ary manomana zavatra vitsivitsy.
Androany isika dia hahita antsipiriany vitsivitsy handaminana sy mankafy fitsangatsanganana fiara. Na miaraka amin'ny fianakaviana, mpiara-miasa na namana dia mety ho traikefa nahafinaritra ny fanaovana dia lavitra. Mazava ho azy fa tsy maintsy ataontsika tsara izany mba hisorohana ny olana amin'ny dia. Midira amin'ny fomba hafa hahitanao an'izao tontolo izao.
1 Tombontsoa amin'ny mandeha fiara
2 Omano ny dianao fiara
3 Inona no entina ao anaty fiara
4 Làlan-kizorana amin'ny dia
5 Ankafizo ny fijanonana rehetra
6 Inona no hialana rehefa mandeha fiara
Tombontsoa amin'ny mandeha fiara
Ho an'ny olona maro, ny fahitana mandeha amin'ny fiara dia toa maharatsy azy, satria maharitra ela kokoa vao tonga amin'ny toerana aleha ary satria tsy maintsy mitondra fiara. Na izany aza, betsaka ny olona misafidy io fomba fitaterana io noho ny antony maro samihafa. Mety izany, ohatra, ho an'ireo olona tsy tia ny fiaramanidina ary te-hanao dia lavitra. Etsy ankilany, ny fandehanana amin'ny fiara dia ahafahantsika mifantoka bebe kokoa amin'ny zavatra hitantsika, afaka atao mahita toerana tena mahaliana. Na dia manana drafitra aza isika ary maniry ny hahatongavantsika, dia afaka mijanona foana amin'ireo toerana mahaliana isika, izay tsy ao anatin'ny mpitari-dalana fa mety manana zavatra manokana. Ity no antony lehibe mahatonga ny fitsangatsangana fiara mety ho zavatra tena miavaka.
Omano ny dianao fiara
Na dia marina aza fa rehefa mandeha fiara dia afaka miala amin'ny fotoana rehetra tadiavintsika isika, fa tsy maintsy voaomana tsara daholo mba tsy hanadino na inona na inona. ny valizy tokony ho ampy mba tsy hahazo aina ao anaty fiara. Raha misy olona maromaro manana fiara dia tsara kokoa ny misafidy ny lehibe indrindra, satria handeha hilamina kokoa izy io. Toy ny amin'ny dia rehetra, dia mila manao lisitry ny zavatra ilaina entina ao anaty valizinao ianao ary tokony handeha mandrakariva miaraka amin'ny lamba firakotra na zavatra mafana raha sendra tonga ny alina ary tsy tonga tany amin'ny nalehantsika isika.
Rehefa manomana ny dia amin'ny fiara ny iray amin'ireo zavatra izay tsy tokony hohadinointsika dia ny mandeha nefa tsy manao avereno jerena ny fiara. Hamarino raha salama tsara ny kodia, misy menaka sy coolant ao anatiny, ankoatry ny fahitana raha tsara ny jiro ary raha mandeha daholo ny fanaraha-maso. Ny olana kely amin'ny dia lavitra dia mety hanjary hanelingelina be, ary miresaka olana momba ny fiarovana isika.
Inona no entina ao anaty fiara
Ao anaty fiara dia tsy maintsy mitondra ny valizy ifotony isika. Ary koa, zava-dehibe izany mitondra jiro, raha sanatria ka mijanona na manamboatra zavatra isika. Ilaina ny palitao mandinika, raha azo atao ny miakanjo ny olona rehetra ao anaty fiara. Tsara ihany koa ny manana vata fampangatsiahana kely hisotroana zava-pisotro na snacks. Miankina amin'ny andehanantsika any amin'ny faritra misy oram-panala, tsy maintsy tadidintsika ihany koa fa tsy maintsy mitondra rojo sy akanjo mafana ho an'io fotoana io isika. Na dia tsy mandeha mivantana amin'ny lanezy aza isika, dia mety hamakivaky faritra be tendrombohitra ny làlan-kaleha, noho izany dia tokony hitandrina tsara amin'ny toetrandro isika.
Làlan-kizorana amin'ny dia
Tsy maintsy mitondra zavatra nomanina foana isika, amin'ny heviny fa nanomana ny fotoana hahatongavana amin'ny toerana iray, miala sasatra ary manohy. Zava-dehibe ny tsy hitaredretra amin'ny fihoaram-pefy hahafahantsika mahatratra ny toerana nokasainay, raha sanatria ka manana toerana efa voatokana hipetrahana. Raha iray amin'ireo izay tia zavatra tsy dia kasaina isika, dia afaka mandeha iray làlana eritreritra bebe kokoa na latsaka ary maka mora, mijanona amin'ny toerana tiantsika sy ankafizintsika isaky ny dingana. Fomba hafa amin'ny fitsangatsanganana sy hahitana toerana mahaliana izany. Ny zavatra tsara momba ny fiara dia ny fahafahantsika manana fahalalahana bebe kokoa raha ny amin'ny fanovana drafitra noho ny hoe mandeha amin'ny fiaramanidina isika, izay raikitra ny fandaharam-potoana sy ny toerana haleha.
Ankafizo ny fijanonana rehetra
Raha te hanana fahombiazana amin'ny dia fiara isika dia tsy maintsy manadino ny fahazoana henatra fiara hahatongavana any amin'ny toerana aleha sns. Raha resaka fitsangatsanganana dia tsy tsara mihitsy ny mihazakazaka, ka tsara kokoa ny mametraka làlana nefa ankafizo ny tontolo tsirairay, isaky ny traikefa sy fijanonana tsirairay. Tsy tokony hatahotra ny hanova ny dia sy hanova ny drafitra isika. Ho an'ity, tsara ny mitady trano honenana azo foanana tsy misy fampandrenesana kely ary tsy andoavam-bola, raha sanatria miova hevitra alohan'ny hahatongavantsika any amin'izay alehantsika na raha maharitra ela isika ka tsy tonga.
Inona no hialana rehefa mandeha fiara
Raha ny resaka fitsangatsangana amin'ny fiara dia tsy maintsy misoroka zavatra sasany ihany koa isika. Ny zavatra voalohany dia ny mandeha maika, raha ny resaka fiara dia tsy tsara mihitsy. Tsara ihany koa ny manana mpamily mihoatra ny iray, satria ny mitondra fiara dia zavatra mankaleo, ary raha iray ihany hanampy ity havizanana ity mandritra ny dia ary ho mavesatra izany. Etsy an-danin'izany, tsara kokoa ny mijanona, ary aza asiana fitsangatsanganana indray mandeha, satria mety ho lasa monotonous ary tsy reraka ny havizanana rehefa mitondra fiara. Tsara ihany koa ny tsy mitondra fiara amin'ny andro ratsy miaraka amin'ny toetrandro ratsy, satria lasa mampidi-doza kokoa ny lalana, indrindra raha tsy fantatsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ahoana ny fomba handaminana sy hankafizana fitsangatsangana fiara